IHadron Collider enkulu isilungele ucwaningo | TeraNews.net
umbhali artem Kushicilelwe ku 01.04.2018
IHallron Collider enkulu yawa izindaba futhi nabasebenzisi be-Intanethi bakhohlwa ngokufakwa. Futhi akumangazi, ngoba njalo ebusika, i-LHC iya ekusetshenzisweni nasekuphucweni kwendlela yesimanje. Entwasahlobo ukujabulisa umhlaba ofundile ngokutholakale okusha emkhakheni we-physics.
UMashi 30 umaka iminyaka eyisikhombisa impela njengoba i-LHC isiza abacwaningi ukutadisha ukubonakala komkhathi nezinqubo zamandla ezihlobene. Ukwethulwa okwenziwe amasonto amabili kukhombisa ukuthi ukufakwa kwakulungele umsebenzi futhi akudingi ukuthi kulungiswe. Ososayensi bahlole izinhlelo zokupholisa i-cryogenic, imvamisa yama-radio resonators, imantshi, imithombo yamandla eyengeziwe, futhi baqinisekisa ukuthi i-LHC ilungele imisebenzi emisha.
Akukaziwa namanje ukuthi yini ososayensi abahlele ukuyivivinya kuHadron Collider yale sizini. Ochwepheshe bathi i-hadron collider ifihla izimfihlo eziningi nokutholakele kusethi. I-LHC iqhathaniswa nendawo yaseMelika engu-51 futhi izigidi zezakhamuzi ziphupha ngokufunda izimfihlo zombuso. Ngemuva kwesitatimende esenziwa yisazi sesayensi yemvelo uStephen Hawking, intshisakalo kwiBig Bang kanye nokuvela kwe-Universe kukhule amahlandla amaningi.
Izazi-mlando ziphupha ukujwayela impucuko yangaphandle. Umkhosi unesifiso sobuchwepheshe obuzosiza emzabalazweni wezinto zemvelo emhlabeni. Futhi osopolitiki banesiqiniseko sokuthi umgadli omkhulu we-hasron ubekhipha imali kwisabelomali sonyaka wesikhombisa.